Maxaan Nahay | FELVIK baarkooda Co., Ltd.
Si wac ah ugu wac
Baarkooda been-abuurka ah
Faux Mink baarkooda
Baarkooda Sintetiga ah
Baarkooda Timaha Faraska
Baarkooda timaha dadka
Indhashareer Xariir ah
Xidhmada & Abaabulayaasha
Felvik, waa summad ka diiwaangashan Shiinaha baarkooda been abuurka ah iyo Sahayda baarkooda kale ee la xidhiidha.
Iyada oo leh xafiiska iibka ee ku yaal Chengdu, gobolka Sichuan, magaalada ugu horumarsan ee koonfur-galbeed Shiinaha iyo warshad ku taal Inner Mongolia, Waqooyiga Shiinaha, Felvik waxay ballanqaadeysaa inay bixiso indhashareerka ugu sarreeya ee adeegga macaamiisha ugu fiican, iyadoon loo eegin inaad weyn tahay ama yar ama hadda bilaabay ganacsiga, dhammaan arrimaha ku saabsan Felvik. Felvik wuxuu bixiyaa baarkooda been abuurka ah aduunka oo dhan.
Khadka Wax Soo Saarka Felvik
Indhashareerka dhabta ah ee bilaashka ah
Baarkooda Beenta ah ee Xarka ah
Maxaad ula shaqeynaysaa Felvik
Adeegga ugu Fiican
Kooxda Khibrada Leh & Xirfadleyda ah waxay ku siineysaa alaabada iyo adeegga ugu wanaagsan ee indhashareerka, si aad ugu kobciso meheraddaada Qalabka Alaabta indhaha iyo beero kale oo qurux badan. Dadka Felvik waxay ku qanacsan yihiin dulqaadka; waxay ku siin doonaan khibrad wacan.
Hal Stop Shopping
In kabadan 500 nooc oo xul ah. Muunadaada iyo sawiradaada ayaa loo heli karaa tijaabada tijaabada.
Baakadaha baarkinka khaaska ah iyo amarada qalabka qurxinta kale ayaa sidoo kale la aqbali karaa.
Qalabka Tayada Sare
Dhammaan alaabtayada cayriin waxay ku jiraan xakameyn tayo leh oo adag dhammaan badeecadaha waxaa lagu sameeyaa gacanta si loo hubiyo tayada.
Timaha mink ee aan isticmaalnay waa 100% dhogor dhab ah, jilicsan, jilicsan, jilicsan. Dhamaan baarkooda dib loo isticmaali karo waxay awoodaan inay isticmaalaan 20-25 jeer si habboonna u maareeya.
Tirada Yar ee Ugu Yar ee alaabta dhexdhexaadka ah iyo codsi MOQ ah oo la awoodi karo ee alaabada la habeeyay
Kooxda Felvik waxay siisaa OEM iyo ODM adeegga jeedal iyo baakado. Kooxda naqshadeynta xirfadeed ee Felvik ayaa kaa caawin doonta inaad kobciso meheraddaada jeedal iyada oo loo marayo naqshadeynta baakadaha gaarka ah ee leh astaantaada gaarka loo leeyahay. Si fikradahaagu u rumoobaan, Felvik wuxuu leeyahay nashqadeeyayaal xirfadlayaal ah oo sameeya sanduuqa sanduuqa.
Tayada marwalba waa furaha kobaca ganacsiga. Felvik wuxuu leeyahay xakameyn tayo leh oo adag dhamaan walxaha kahor soo saarida iyo xakamaynta tayada adag ee dhamaan badeecooyinka la dhameeyay kahor dhalmada, dhamaan badeecada aad nagahesho waa kuwo tayo leh oo dammaanad leh. 100% adeegga iibka kadib markii cabasho dhacday.
Aagga Teknolojiyada Sare ee Chengdu, Shiinaha (Sichuan) Aagga Ganacsiga Duuliyaha Duulimaadyada Bilaashka ah, Chengdu, 610051 Gobolka Sichuan, Shiinaha
Toban talo oo ay tahay inaad ogaato - F ...
Ku nadiifi baarkooda beenta adoo adeegsanaya caag ...
Sidee loo nadiifiyaa baarkooda beenta ah? Habka koowaad!